काठमाडौं : सिंगापुरको नेसनल युनिभर्सिटी अस्पिटलमा उपचार सकेर प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली आज (शुक्रबार) स्वदेश फर्किंदै छन् । उनी मध्याह्न ११ः४५ बजे त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा ओर्लिने प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्याल जानकारी दिए ।
गत भदौ ५ गते मृर्गौलाको फलोअप उपचारका लागि सिंगापुर पुगेका प्रधानमन्त्री ओली १६ दिनको दिन स्वदेश फर्किंन लागेका हुन् । उनलको स्वास्थ्यमा सामान्य र सुधारोन्मुख देखिएकाले स्वदेश फर्किन लागेको हुन् ।
ओलीको सिंगापुरमा ‘प्लाज्माफेरिसस’ को उपचार विधिबाट मृर्गौलाको उपचार गरिएको थियो । दिन बिराएर गर्नुपर्ने प्लाज्माफेरेसिस उपचार विधि बुधबार सकिएको थियो ।
प्रधानमन्त्रीका प्रेस सल्लाहकार डा. कुन्दन अर्यालका अनुसार प्रधानमन्त्रीसँगै नेकपाका सचिवालय सदस्य वामदेव गौतम, महासचिव विष्णु पौडेललगायत प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न पुगेका नेताहरू पनि स्वदेश फर्किंदै छन् ।
कार्यवाहक प्रधानमन्त्री एवं रक्षामन्त्री ईश्वर पोखरेलले पार्टीका अध्यक्षद्वय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र नेकपा अध्यक्ष प्रचण्डबीच विवाद नरहेको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री र पार्टी अध्यक्ष आलोपालो गरेर चलाउने भन्ने विषयमा एकतादेखि अहिलेसम्म छलफल ...
सानो जाति भनेर होटेलमा चिया खान नदिएको भन्दै मोरङमा एक व्यक्तिले प्रहरीमा जाहेरी दिएका छन्। मोरङको पथरी शश्चिरे नगरपालिका ४ का ६० वर्षीय डिमोने कामीले रुद्रबहादुर कटुवाल र टलकबहादुर पाण्डेलाई कारबाहीको ...